कल्याणपुरमा कांग्रेसको गढ तोड्दै एमाले विजयी - Sankalpa Khabar
4. अर्थमन्त्रीको राजीनामापछि प्रचण्ड र देउवाबिच भेटवार्ता
5. पीएसजीको मुख्य प्रशिक्षकमा गाल्टिएर नियुक्त
६ जेष्ठ १३:४९
सिरहा । सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका प्रमुखमा एमालेका रामपुकार साह तेली विजयी भएका छन् । उनले पाँच हजार ८८३ मत पाए । उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका धर्मनाथ यादवले पाँच हजार ३५३ मत ल्याए ।
उपप्रमुखमा पनि एमालेकै रेखाकुमारी यादव विजयी भएकी छन् । उनले पाँच हजार ७३३ मत प्राप्त गरिन् । प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका धनेश्वरीदेवी मण्डलले पाँच हजार ४७० मत र जसपाका मसुदा खातुनले चार हजार ५४५ मत प्राप्त गरे।
१२ वडा रहेको पालिकामा जसपा तीन, एमाले पाँच, कांग्रेस दुई, एकीकृत समाजवादी एक र जनमत पार्टी एक वडामा विजयी भएकाे छ । ०७४ को निर्वाचनमा नगरपालिका प्रमुखमा कांग्रेसका सूर्यनाथ मण्डल निर्वाचित भएका थिए।
वडा नम्वर १, २ र १० मा जसपाका वडाध्यक्ष विजयी भएका छन्। वडा नम्वर १ मा ६ सय ५४ मत प्राप्त गर्दै जयराम कामती, २ मा ६ सय ९६ मत प्राप्तसहित मो. साकिर र वडा नम्वर १० मा ६ सय ४९ मत प्राप्त गर्दै नन्दकिशोर साह निर्वाचित भएका छन्।
एमालेबाट वडा नम्वर ३ मा एक हजार ५८ मतसहित रामदुलार मण्डल, ४ मा नाै सय ५९ मतसहित प्रदिपकुमार यादव, ६ नम्वर वडामा तीन सय १३ मतसहित दिनेश यादव, वडा नम्वर ११ मा आठ सय २५ मतसहित परमेश्वर साह र १२ नम्वर वडामा एक हजार दुई सय ७४ मतसहित दिलीपकुमार यादव विजयी भएका छन्।
कांग्रेसका कुलदीप यादव सात सय ९५ मतसहित वडा नम्वर ५ र वडा नम्वर ८ बाट रामकिशोर यादव सात सय तीन मतसहित विजयी भएका छन्।
एकीकृत समाजवादीका विष्णुदेव यादव नाै सय २८ प्राप्त गर्दै वडा नम्वर ८ को वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। जनमत पार्टीका विनोदकुमार यादव पाँच सय चार मत प्राप्त गर्दै वडा नम्वर ९ मा विजयी भएका छन्।
दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको अनुमोदन रेटिंग ४४.४ प्रतिशतमा झर्‍यो
२० असार ११:५२
खोटाङमा लोपोन्मुख तिलुङ भाषामा पठन–पाठन सुरु
२१ असार ०९:४२
सर्वनाम शिक्षालयका होस्टेल वार्डेनलाई पठाइयो पुर्पक्षका लागि थुनामा
१६ असार १७:२२
१९ असार १८:५१
रेल्वे विधेयकमा सत्ता र प्रतिपक्षकाे एकमत, राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतले पारित
१७ असार १३:५६
बागमतीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीको हस्ताक्षर संकलन
१६ असार १५:२४
‘ब्रेक’ सामान्य कसकास गरेर चलाइएको थियो, घुम्तीमा मोड्न नसक्दा…
२१ असार १४:३६
जसपाका नयाँ मन्त्रीले लिए सपथ
२० असार १७:५१
धनगढीको नगरसभामा तनाव, कुर्सी फालाफाल
२० असार १५:४७
२१ असार १२:४३